Ashley Young Oo Noqday Xiddigii Ugu Dambeeyey Ee Korona
Ashley Young ayaa noqday ciyaartoygii ugu dambeeyey ee la xaqiijiyey inuu ku dhacay xanuunka Korona Fayras, waxaana la gelinayaa karantiil uu ku jiri doono illaa inta uu dhaafayo heerka gudbinta xanuunka.
Inter Milan ayaa shaacisay in baadhitaan lagu sameeyey laacibkan lagaga helay xanuunka Korona Fayras, isla markaana uu garoomada ka maqnaan doono muddo toban maalmood ka badan oo aanu qayb ka noqon doonin kooxda.
Warkan ayaa soo baxay xilli ay ciyaartoyda aan looga yeedhin xulalkooda ay isku diyaarinayaan kulanka adag ee Sabtida soo socota ay isku haleeli doonaan AC Milan oo ay isku magaalo yihiin.
War-saxaafadeedka ay Inter Milan soo saartay ayay ku tidhi: “Inter waxay shaacinaysaa in Ashley Young laga helay xanuunka KOOFID-19 kaddib baadhitaanno lagu sameeyey shalay (Sabtidii) oo lagaga qaaday Appiano Gentile. Laacibka reer England waxa uu mar horeba bilaabay inuu isku karantiilo gurigiisa.”
Xanuunkan oo Talyaaniga si weyn ugu faafay bishii March ayaa illaa hadda waxa uu u geeriyooday 36,000 qof oo dalkaas ku nool, waxaana mar kale muuqata inuu dib u dillaacay oo uu faafayo inkasta oo markan ay dadku faham buuxa ka haystaan qaabka uu u faafayo, halistiisa iyo sida la iskugu gudbin karayaba.
Young oo bishii July ay da’diisu noqotay 35 jir ayaa Inter Milan u saftay dhamaan saddexdii kulan ee xili ciyaareedkan, waxaana uu caawin sameeyey ciyaartii ay 5-2 ku xasuuqeen Benevento dhamaadka bishii September.
Inter Milan oo ku jira kaalinta saddexaad ee horyaalka ee xili ciyaareedkan waxay leedahay toddoba dhibcood oo ay ka heshay sagaal dhibcood oo suurtogal ahaa, waxaanay labada dhibcood ku lumiyeen ciyaartii Lazio ay 1-1 ku barbarreeyeen.
Booqasho uu RW Rooble ku tagay isbitaalo oo loo xiray